Hitch (2005) | MM Movie Store
(Warning – FA မြား၊ ရညျးစားမရှိသူမြား စိတျမခိုငျလြှငျ မကွညျ့သငျ့ပါ။ အခနျ့မသငျ့လြှငျဤကားကွညျ့ပွီး မကွာခငျ ရညျးစားရသှားနိုငျပါသညျ ရညျးစားရှိသျောလညျး မိနျးကလေးတှအေကွောငျး အထာမနပျသူမြား ကွညျ့သငျ့ကွညျ့ထိုကျသော ကားကောငျးတဈကားဖွဈသညျ)
ဒီကားလေးကို ကွညျ့ပွီးသှားကွရငျတော့…ယောကျြားလေး အမြားစု မိနျးကလေးတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး “ငါမဖွဈနိုငျပါဘူးကှာ၊ ငါ့ပုံစံကွီးက သူနဲ့မကိုကျလောကျပါဘူးကှာ” ဆိုတဲ့ ခံယူခကျြ၊
ဒီကားထဲမှာ ကြှနျတျောတို့ ယောကျြားလေးအမြားစုအတှကျ ကိုယျခဈြကွိုကျနတေဲ့ ခှကျနတေဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျကို ရညျးစားစကားပွောဖို့ဆိုတာ ဘယျလောကျတောငျမလှယျလိုကျလဲဆိုတာ တှရေ့ပါလိမျ့မယျ…
(လှယျလှယျကွိုကျ လှယျလှယျပွတျ ခတျေကွီးထဲမှာ ဒီစကားက ရယျစရာလဲဖွဈကောငျးဖွဈနပေါလိမျ့မယျ)ဒီဇာတျကားလေးထဲမှာ…* မိနျးကလေးတဈယောကျကိုတကယျခဈြကွိုကျမိသှားရငျ မိနျးမကမျြးကပြေါတယျဆိုတဲ့သူတောငျ အထဈထဈအငေါ့ငေါ့ ဖွဈတတျပုံတှေ…
မိနျးကလေးတှေ ဘယျလိုပွုမူပွီဘယျလိုပွောဆိုပွီဆို အဲ့တာဘာကိုဆိုလိုခငျြတာ…ပထမဆုံးအနမျးတဈခုအပျေါမှာ မိနျးကလေးအမြားစုရဲ့သဘောထား…အခဈြတဈခုဖွဈပျေါလာဖို့ဆိုတာ
ဇာတျလမျးအကဉျြးလေး ပွောရရငျ…အဲလပျဈဟဈရျှ(Will Smith)ဆိုတာ Date doctor တဈယောကျပါ(ဖူးစာရေးနတျ သဘောမြိုးပေါ့)မိနျးကလေးတှနေဲ့ပတျသတျပွီး မိမိကိုယျကိုသိမျငယျတတျသူတှေ မဖွဈနိုငျပါဘူးဆိုပွီး မွိုသိပျနရေတဲ့ ယောကျြားလေးတှအေတှကျတော့ အားကိုရာဆရာတဈပါးပေါ့…
ဆာရာမီးလပျဈ(Eva Mendes)…. ဆိုတာကတော့ ဂြာနယျတိုကျတဈခုက အတငျးအဖငျြးကဏ်ဍအတှကျ ပငျတိုငျဆောငျးပါးရှငျတဈယောကျပါသူကတော့ အပြိုကွီး မမတဈယောကျ…
ယောကျြားတှကေို ဖောကျပွနျတတျတဲ့သူတှလေို့ပဲ တထဈခမြှတျထားတာ…
အပြိုကွီးတှမှောရော ခဈြတတျတဲ့ နှလုံးသားရှိပါ့မလား? ? ?အဲလကျဈဟဈရျှ လို မိနျးမကမျြးကတြေဲ့ ယောကျြားမြိုးနဲ့ ဆာရာမီးလပျဈလို ယောကျြားမုနျးဝါဒီသဘောမြိုး လကျကိုငျထားသူနှဈယောကျတှပွေီ့း ဘာတှမြေားဆကျဖွဈကွမလဲ….အဲလကျဈဟဈရျှ ရဲ့အလုပျက လြှို့ဝှကျပွီးလုပျရတဲ့အလုပျဆာရာမီးလပျဈ အလုပျက ဖျောကောငျအလုပျ…
သူတို့နှဈယောကျဘယျလိုမြား စခနျးသှားကွမှာလဲ? ? ?ဒီနရောမှာ ဇာတျကားတဈခုလုံး မပငျြးရလအေောငျ အဆုံးထိချေါဆောငျသှားပမေဲ့ ဇာတျကောငျတဈဦးရှိပါသေးတယျ…
အဲလျဘတျဘရနျနာမငျး(Kevin James) – သူကတော့ ကြှနျတျောပွောခဲ့သလိုပဲ”မမှီတဲ့ပနျးကို တုံးခုလှမျးခငျြမိတဲ့တဈယောကျ” မဝံ့မရဲစိတျတှနေဲ့ အားငယျစိတျတှနေဲ့ ဟဈရျှဆီရောကျလာရတဲ့အခါဟဈရျှတဈယောကျအဆငျပွအေောငျ ကူညီပေးနိုငျပါ့မလား
အမွဲတမျးအလှဲလှဲအခြျောခြျောတှပေဲဖွဈနတေတျတဲ့ အဲလျဘတျတဈယောကျရော သူခဈြမိသှားတဲ့အယျလီဂရာ(Amber Valletta)ဆိုတဲ့သူရဲ့အလုပျရှငျ သူဌေးမအကြျောအမျောလေးရဲ့
အခဈြကို ပိုငျဆိုငျနိုငျပမလား? ? ?မငျးသားကွီး Will Smith ရဲ့ရုပျရှငျကားတှကေိုတော့ အားလုံးမှတျမှတျရရဖွဈလောကျမှာပါ…
ဒါ့ကွောငျ့ ဟာသမငျးသားကွီး Kevin James ရဲ့ကြှနျတျောတို့နဲ့ရငျးနှီးပွီးသားလူသိမြားတဲ့ကားအခြို့ကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ
(Warning – FA များ၊ ရည်းစားမရှိသူများ စိတ်မခိုင်လျှင် မကြည့်သင့်ပါ။ အခန့်မသင့်လျှင်ဤကားကြည့်ပြီး မကြာခင် ရည်းစားရသွားနိုင်ပါသည် ရည်းစားရှိသော်လည်း မိန်းကလေးတွေအကြောင်း အထာမနပ်သူများ ကြည့်သင့်ကြည့်ထိုက်သော ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်သည်)
ဒီကားလေးကို ကြည့်ပြီးသွားကြရင်တော့…ယောက်ျားလေး အများစု မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး “ငါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ၊ ငါ့ပုံစံကြီးက သူနဲ့မကိုက်လောက်ပါဘူးကွာ” ဆိုတဲ့ ခံယူချက်၊
ဒီကားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားလေးအများစုအတွက် ကိုယ်ချစ်ကြိုက်နေတဲ့ ခွက်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရည်းစားစကားပြောဖို့ဆိုတာ ဘယ်လောက်တောင်မလွယ်လိုက်လဲဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်…
(လွယ်လွယ်ကြိုက် လွယ်လွယ်ပြတ် ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီစကားက ရယ်စရာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်)ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ…* မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်ကြိုက်မိသွားရင် မိန်းမကျမ်းကျေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတောင် အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့ ဖြစ်တတ်ပုံတွေ…
မိန်းကလေးတွေ ဘယ်လိုပြုမူပြီဘယ်လိုပြောဆိုပြီဆို အဲ့တာဘာကိုဆိုလိုချင်တာ…ပထမဆုံးအနမ်းတစ်ခုအပေါ်မှာ မိန်းကလေးအများစုရဲ့သဘောထား…အချစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာ
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေး ပြောရရင်…အဲလပ်စ်ဟစ်ရှ်(Will Smith)ဆိုတာ Date doctor တစ်ယောက်ပါ(ဖူးစာရေးနတ် သဘောမျိုးပေါ့)မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုသိမ်ငယ်တတ်သူတွေ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး မြိုသိပ်နေရတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေအတွက်တော့ အားကိုရာဆရာတစ်ပါးပေါ့…
ဆာရာမီးလပ်စ်(Eva Mendes)…. ဆိုတာကတော့ ဂျာနယ်တိုက်တစ်ခုက အတင်းအဖျင်းကဏ္ဍအတွက် ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်တစ်ယောက်ပါသူကတော့ အပျိုကြီး မမတစ်ယောက်…
ယောက်ျားတွေကို ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သူတွေလို့ပဲ တထစ်ချမှတ်ထားတာ…
အပျိုကြီးတွေမှာရော ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိပါ့မလား? ? ?အဲလက်စ်ဟစ်ရှ် လို မိန်းမကျမ်းကျေတဲ့ ယောက်ျားမျိုးနဲ့ ဆာရာမီးလပ်စ်လို ယောက်ျားမုန်းဝါဒီသဘောမျိုး လက်ကိုင်ထားသူနှစ်ယောက်တွေ့ပြီး ဘာတွေများဆက်ဖြစ်ကြမလဲ….အဲလက်စ်ဟစ်ရှ် ရဲ့အလုပ်က လျှို့ဝှက်ပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဆာရာမီးလပ်စ် အလုပ်က ဖော်ကောင်အလုပ်…
သူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုများ စခန်းသွားကြမှာလဲ? ? ?ဒီနေရာမှာ ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံး မပျင်းရလေအောင် အဆုံးထိခေါ်ဆောင်သွားပေမဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးရှိပါသေးတယ်…
အဲလ်ဘတ်ဘရန်နာမင်း(Kevin James) – သူကတော့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ”မမှီတဲ့ပန်းကို တုံးခုလှမ်းချင်မိတဲ့တစ်ယောက်” မဝံ့မရဲစိတ်တွေနဲ့ အားငယ်စိတ်တွေနဲ့ ဟစ်ရ်ှဆီရောက်လာရတဲ့အခါဟစ်ရ်ှတစ်ယောက်အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါ့မလား
အမြဲတမ်းအလွဲလွဲအချော်ချော်တွေပဲဖြစ်နေတတ်တဲ့ အဲလ်ဘတ်တစ်ယောက်ရော သူချစ်မိသွားတဲ့အယ်လီဂရာ(Amber Valletta)ဆိုတဲ့သူရဲ့အလုပ်ရှင် သူဌေးမအကျော်အမော်လေးရဲ့
အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပမလား? ? ?မင်းသားကြီး Will Smith ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုတော့ အားလုံးမှတ်မှတ်ရရဖြစ်လောက်မှာပါ…
ဒါ့ကြောင့် ဟာသမင်းသားကြီး Kevin James ရဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားလူသိများတဲ့ကားအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
Lupin (Season 1) အပိုငျး (၃)